IShishino lokuThuthukisa iHitrice ngokuqulunqwa, iGeneral Induction Generator
Ikhaya / I-KGPS Generator Series / UkuBumba kweZiko lokuTyumba ngokuSebenza
Ushishino Olufake Isitratshi Ngokuchithwa
Udidi: I-KGPS Generator Series tags: Ukwenza iziko, izixhobo zokwenziwa, umatshini wokuqhelanisa, ukuvelisa izithando kwiziko, umatshini wokudibanisa imveliso, umzi mveliso wokudala iziko
I-1 Ukuba i-induction iqulunqa isithana semveliso ye-metallurgical,
I-2 icandelo leSiseko,
I-3 Ukuseka imboni,
I-4 Icandelo lokunyuka kwamafutha,
Ixesha lokukha amanzi min 10-40 10-40 20-50 20-50 20-50 20-50 25-55 30-60 30-60
1. Isizukulwana esitsha sogcino lwamandla e-IF iziko lokungenisa linempembelelo encinci yamandla, ukubumba kunye nokunyibilika kokusebenza okuphezulu, ukufana kweqondo lobushushu, ukulahleka kwe-oxidation encinci, kulula ukuyilawula, ukusebenza kwe-thermal ukusebenza kulungile njalo njalo. UKUBA inkqubo yokulawulwa kwesithando somlilo usebenzisa i-silicon elawulwa yi-AC-DC yokuguqula amandla, i-digital non-relay control, ngokuthembeka okuphezulu kunye nokusebenza kwamaxesha amaninzi okulwa nokuxhamla ngokulandelela ngokuzenzekelayo, iinkqubo zomsebenzi ngaphandle kokungenelela komntu, ukulinganisa ngokuzenzekelayo umthwalo kunye amandla. Ngaphezulu ngoku, ngaphezulu kwamandla ombane, ukungabikho kwesigaba, ukwanela kokukhusela uxinzelelo lwamanzi oluvumela izixhobo nakuphi na ukusilela ukwenzeka ngexesha lokusebenza kungonakalisi izinto, ukunciphisa ukusetyenziswa kwezixhobo kunye neendleko zokugcina. Ngobushushu obungena ngaphakathi, ukunyibilika, ukubamba, unyango lobushushu, ukuntywila, njengokuxhasa ukusetyenziswa kwekristale enye etsaliweyo. Ngaba unokunyusa inkqubo yempendulo yeqondo lobushushu, ukwakheka kobushushu obuvaliweyo-inkqubo yohlengahlengiso oluzenzekelayo: yonyusa ubushushu besahlulo esiqhotyoshelwe koomatshini, ukufezekisa kuphela ukuthumela ubushushu obufanelekileyo bokuqina kwesitishi somsebenzi. Ukongezwa konxibelelwano olukhethekileyo, yamkela i-PLC okanye "ujongano lomatshini womntu", umatshini wolawulo lomatshini kunye nenkqubo yokufudumeza ukufezekisa ulawulo olukrelekrele, kunye nesixhobo solawulo lobushushu esikrelekrele kulawulo lobushushu oluchanekileyo lokuphunyezwa kokunyibilikisa kunye nokwenza ubushushu.
2 isithando somlilo siquka:
I-3 exhasa izixhobo zokuzikhethela:
Ukuthunyelwa kweTyunithi yokuThuthuza okuThuthukileyo yokuThuthukisa
Ukukhutshwa kweeBillets kunye neeHotesi zeMantshi nge IGBT Moudle